SLP Environmental - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုမျိုးစုံအား အကဲဖြတ်စီစစ်ပေးခြင်း နှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲပေးခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) ဆိုသည်မှာ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရသော် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု၊ ကုန်ပစ္စည်း အသစ်များ တီထွင်ထုတ်လုပ်မှု အစရှိသော လုပ်ငန်းများ စတင်သည့် အချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဘေးထွက် ပြဿနာများကို တွက်ချက်ကာ ကြိုတင်ကာကွယ် ဖြေရှင်းသည့် လုပ်ငန်း စဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ မည့်သည့် အကောင်း အဆိုး သက်ရောက်မှု မဆို စီမံကိန်းရေးဆွဲချိန် နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များမချမီ စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါ က ရေရှည်တည်တံ့ဖွံ့ဖြိုးရေး စည်းကမ်းချက်များန ှင့်အညီ ဖြစ်စေရန် လုပ်ငန်းခွင် ဧရိယာတစ်ခွင်တွင်(AOI) ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဘေးထွက် သက်ရောက်မှုများကို အများဆုံးလျော့ ချနိုင်ရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ရေးသည် ဤ ESIA ၏ ပင်မရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ESIA အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းသည် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် နေစဉ်တလျောက်လုံး တွင် ဘက်ပေါင်းစုံအား အထူးပြု အသေးစိတ် ဆန်းစစ် လေ့လာမှုများ နှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများတို့ဖြင့် အဆင့်ပေါင်း များစွာပါဝင်နေပါသည်။ ယင်း အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်းတွင်ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အ ဆင့်ဆင့် အကုန်လုံးကို SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မှအပြည့် အဝ ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် များစွာထဲမှာ အချို့မှာ
Environmental and social due diligence (ESDD) assessments
Environmental baseline surveys (air, sediment, soil, water quality, traffic, noise and vibration etc.)
Ecological baseline studies (habitat, flora and fauna surveys, biodiversity appraisals etc.)
Traffic baseline surveys
Socio-economic cultural baseline studies
Stakeholder mapping and preparation of Stakeholder Engagement Plans (SEPs)
Public Disclosure and multi-level Stakeholder Engagement activities
Air dispersion modelling (ADM) and greenhouse gas quantification (GHGQ)
Impacts identification and evaluation
Preparation of the Environmental and Social Management and Monitoring Plans (ESMMP)
Preparation of EMP sub-component plans (e.g. Waste Management Plan, Oil Spill Response Plan)
အဓိကအားဖြင့် ESIA အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်း များ (IFC and ADB) မှ သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု ရေး လှုပ်ရှား မှုများ စံချိန်စံညွှန်း နှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ဒေသ၏ တရားဝင် လိုအပ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ အထူးဆောင်ရွက် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ သည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ စိုက်ပျိုးစီးပွားလုပ်ငန်း၊ ကုန်စည်လု ပ်ငန်း၊ စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် မှုလုပ်ငန်း၊ အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်အ သုံးပြုနိုင် သော စွမ်းအင် အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ နှင့် မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး လုပ်ငန်း အစရှိသော အာဆီယံတစ်ခွင်လုံးရှိ လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုး တို့အတွက် အရည်အသွေး မြင့်မားသည့် ESIA အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ထားသော မှတ်တမ်းများကိုလည်း လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင် ထားပါသည်။
အဓိကအားဖြင့် ESIA အကဲဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်း များ (IFC and ADB) မှ သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး လှုပ်ရှားမှု များ စံချိန်စံညွှန်း နှင့် လုပ်ငန်းတည်နေရာ ဒေသ၏ တရားဝင် လိုအပ်ချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီအထူး ဆောင်ရွက် မှု ပြုပေးပါသည်။ စီမံကိန်းငှားရမ်းဆောင်ရွက်သူများနှင့် ရင်းနှီးမြှပ် နှံသူများ ကိုယ်စားလည်း ကျွမ်းကျင်သူနေ ရာမှ အမြင်များ၊ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် စီမံကိန်းပြန်လည်သုံး သပ်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါ သည်။
ကျွန်တော်များ၏ နိုင်ငံတကာ အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် အာဆီယံ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ စုပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော ဤအဖွဲ့အစည်း သည် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်နှင့် ပြည်သူ လူထုအပေါ် သက်ရောက်မှုမျိုးစုံအား အကဲဖြတ်စီစစ်ပေးခြင်း နှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲပေး ခြင်းတို့ကို အာဆီယံဒေသ တစ်ခွင်လုံးတွင် အောင်မြင်စွာ ကူညီဆောင်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သော နေရာဒေသ အကြောင်း၊ တရားဝင် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအကြောင်း နှင့် ထိုဒေသဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ သိနားလည်ထား ခြင်းများရှိသောကြောင့် SLP ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မှာ အာဆီယံ စီးပွားရေး ဈေးကွက်နယ်ပ ယ်တွင် နည်းပညာနှင့် အတတ်ပညာပိုင်း၊အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အရည်အသွေးမြင့် မြင့်မားမား ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သောကြောင့် ထိပ်တန်းနေရာတွင် ရပ်တည်နေလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ တကာ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၊ ဒေသခံ စီမံကိန်းဆောင် ရွက်သူ များနှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူတို့၏ စီမံကိန်းများ အတွက် ESIA အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားသော မှတ်တမ်းများမူများကို လိုအပ်၍တောင်းခံပါက ကြည့်ရှုလေ့လာခွင့်ပေးပါသည်။
အခြေခံ လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုများ
Site Reconnaissance and Ground Truthing Studies
Screening & Scoping Studies
Socio-Economic Baseline Studies (SEBS)
Stakeholder ID and Profiling
Initial Public Consultations/Stakeholder Engagement
Cultural, Archaeological & Heritage Studies
Terrestrial & Aquatic Ecological Baseline Studies
Marine & Coastal Ecological Studies
Phase 1,2&3Ecological Appraisals
Air, Soil & Water Quality Surveys
Mapping & Geographical Information Systems (GIS)
သဘာဝတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို အကဲဖြတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
Policy, Legal Administrative Framework
Socio-Economic & Cultural Impact Assessment
Air Dispersion Modelling & GHG Quantification
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များ
Environmental Management & Monitoring Plans (EMMP)
Socio-Economic Management & Monitoring Plans (SMMP)
Social Action Plans; Resettlement Action Plans, Livelihoods Restoration Plans and Community Development Plans.
Stakeholder Engagement, Consultations & Disclosure
HazMat Management Plans
Thailand, Metallurgical, Impact Assessment & Planning